Rindrambaiko fanivanana sary-sivana Sky
Ny voalohany mamoaka fakan-tsary mihetsika dimy-lens ao anaty 1000g (D2), avy eo DG3 (650g), avy eo DG3mini (400g).
Solomaso optika novolavolaina tsy miankina. Gauβ indroa namboarina sy solomaso Asherika miely ambany
fikajiana ny asan'ny tany, fandrefesana ny haavony, fanaraha-maso ny fiarovana
Orinasa teknolojia avo lenta, mifantoka amin'ny sarin-tsary miavaka, manohy manavao.
Fantaro ny tantaran'ny orinasanay sy ireo olona ao aoriany.
Andeha averintsika ny fiverenana amin'ny 2011, bandy izay vao nahazo diplaoma Master of Southwest Jiaotong University, dia liana fatratra amin'ny maodelin'ny fiaramanidina.
Namoaka lahatsoratra iray antsoina hoe "Stability of Multi-Axis UAVs" izy, izay nahasarika ny sain'ny profesora iray amin'ny oniversite malaza. Nanapa-kevitra ny hanome famatsiam-bola ny fikarohana momba ny fampisehoana drone sy ny fampiharana ary tsy nandiso fanantenana ilay profesora izy.
Tamin'izany fotoana izany, ny lohahevitry ny "Smart City" dia tena nafana tokoa tany Shina. Ny olona dia nanamboatra maodely 3D an'ny tranobe miantehitra amin'ny angidimby lehibe misy fakantsary fakantsary avo lenta (toy ny dingana voalohany XT sy XF).
Ity fidirana ity dia misy fihoarana roa:
1. Lafo be ny vidiny.
2. Betsaka ny fameperana ny sidina.
Miaraka amin'ny fivoaran'ny haitao drone haingam-pandeha, ny drone indostrialy dia nampiditra fitomboana nipoaka tamin'ny taona 2015, ary nanomboka nitety ny fampiharana drôna isan-karazany ny olona, ​​anisan'izany ny haitao "fakana sary miavaka"
Ny fakana sary oblique dia karazan-tsarimihetsika an-habakabaka izay anaovan'ny axis fakan-tsary mihilana hatrany ambony mitsivalana amin'ny zoro voatondro. Ireo sary, araka izany, dia nanambara ny antsipirihany misaron-tava amin'ny fomba sasany amin'ny sary mitsangana.
Tamin'ny taona 2015, nihaona tamina tovolahy iray hafa izay efa nanangona traikefa an-taonany maro teo amin'ny sehatry ny fanadihadiana sy ny saritaka ity lehilahy ity, ka nanapa-kevitra ny hiara-hiasa amina orinasa manokana momba ny fakana sary miavaka, antsoina hoe RAINPOO.
Nanapa-kevitra ny hamolavola fakantsary misy zoro dimy misy hazavana sy kely izy ireo mba hoentina eny ambonin'ilay fiaramanidina, dia natambany fotsiny aloha ny SONY A6000 dimy, saingy hita fa tsy afaka mahazo vokatra tsara ny fampidirana toy izany, mbola mavesatra be ihany, ary tsy azo entina amin'ny drôna izy mba hanaovana asa an-tsarintany avo lenta.
Nanapa-kevitra ny hanomboka ny lalan'ny fanavaozana azy ireo hatrany ambany izy ireo. Rehefa vita ny fifanarahana nifanaovana tamin'i SONY, dia nampiasa ny cmos an'i Sony izy ireo mba hamolavola ny masolavitra azy ireo, ary io masomaso io dia tokony hanaraka ny fenitry ny indostrian'ny fanadihadiana sy ny sarintany.
Riy-E2: izao tontolo izao's fakantsary mitresaka totohondry izay ao anatin'ny 1000g (850g), solomaso optika novolavolaina manokana hanaovana fanadihadiana sy fanaovana sarintany.
Nanjary fahombiazana lehibe io. Tamin'ny 2015 fotsiny dia namidy singa 200 an'ny D2 mihoatra ny 200 izy ireo. Ny ankamaroan'izy ireo dia nentina tamin'ny drôna marolafy ho an'ny asa fanaovana maodely 3D kely. Na izany aza, ho an'ny asa lehibe maodely 3D misy trano avoavo dia mbola tsy vitan'ny D2 io.
Tamin'ny 2016, teraka ny DG3. Raha ampitahaina amin'ny D2, nanjary maivana kokoa sy kely kokoa ny DG3, miaraka amin'ny halavan'ny fotoana lava kokoa, 0,8s ihany ny elanelam-potoana faran'izay kely indrindra, miaraka amin'ny fanesorana vovoka sy ny famafana ny hafanana… Ny fanatsarana ny fahombiazana isan-karazany dia mahatonga ny DG3 azo entina amin'ny elatra raikitra ho an'ny lehibe- faritra 3D asa-maodely.
Indray mandeha indray, Rainpoo dia nitarika ny fironana amin'ny sehatry ny fanadihadiana sy ny sarintany.
Riy-DG3 ： lanja 650g, halava mifantoka 28/40 mm, ny elanelam-potoana farafahakeliny dia ny 0,8s ihany.
Na izany aza, ho an'ny faritra an-tanàn-dehibe, ny fanahafana ny 3D dia mbola asa sarotra tokoa. Tsy toy ny fitakiana avo lenta amin'ny sehatry ny fanadihadiana sy ny sarintany, ny faritra fampiharana bebe kokoa toa ny tanàna marani-tsaina, ny sehatra GIS, ary ny BIM dia mila maodely 3D avo lenta kokoa.
Mba hamahana ireo olana ireo, teboka telo farafahakeliny tsy maintsy hihaonana ：
1. Halava mifantoka kokoa.
2. Pikantsary bebe kokoa.
3. Elanelam-potoana fohy kokoa
Taorian'ny famerenana matetika ny fanavaozana ny vokatra, tamin'ny taona 2019, teraka ny DG4Pros.
Fakan-tsary miavaka tanteraka ho an'ny fakan-tsary 3D amin'ny faritra avo lenta an-tanàn-dehibe, miaraka amin'ny piksela 210MP, ary 40 / 60mm halavany, ary elanelam-potoana fampidirana 0.6s.
Riy-DG4Pros ： boribory feno, halavan'ny 40/60 mm, ny elanelam-potoana farafahakeliny dia 0,6 ihany.
Fakan-tsary miavaka tanteraka ho an'ny fakan-tsary 3D amin'ny faritra avo lenta an-tanàn-dehibe, miaraka amin'ny piksela 210MP totaliny ary 40 / 60mm ny halavany, ary elanelam-potoana 0,6 s mipoitra.
Amin'izay fotoana izay dia tena lavorary ny rafitry ny vokatra Rainpoo, saingy tsy nijanona ny lalan'ny fanavaozana an'ireto tovolahy ireto.
Te-hihoatra ny tenany foana izy ireo ary nanao izany.
Tamin'ny taona 2020, teraka ny karazana fakantsary mihetsika iray manodinkodina ny fahatsapan'ny olona - DG3mini.
Weight350g, refes6969 * 74 * 64, farafahakeliny 0,4 elanelam-potoana fampandrenesana, fampisehoana tsara sy fitoniana ……
Avy amin'ny ekipa tovolahy roa ihany, ka hatramin'ny orinasa iraisampirenena misy mpiasa 120+ ary mpizara sy mpiara-miasa 50+ eran'izao tontolo izao, dia noho ny fientanentanana amin'ny "fanavaozana" sy ny fikatsahana ny kalitaon'ny vokatra izay mahatonga an'i Rainpoo tsy nitsaha-nitombo. .
Rainpoo ity, ary mitohy ny tantaranay ……